China OEM face fototra makiazy ranon-javatra ambongadiny fanao manokana marika vegan fototra fananganana tarehy cosmetika sy mpamatsy | Iris Beauty
OEM tarehy fototra makiazy ranon-javatra ambongadiny fanao manokana marika vegan fototra fanatsarana tarehy
Fototra maivana miaraka amin'ny fandrakofana faratampony sy farany vita matte. Ny fandrakofana feno dia miasa ihany koa mba hifehezana ny famirapiratana sy ny fanamasinana ny hoditranao tontolo andro. Saingy tsy mijanona eo izy: ity fototra mahazatra ity dia mety amin'ny karazana hoditra mahazatra, menaka, mifangaro ary marefo.
Ny fototr'aretina dia manana endrika malefaka sy malefaka, fanitarana tsara, mora atosika, tsy clump, ary manome rakotra feno. Afaka manarona mahomby ny hoditra toy ny holatra mony, teboka maizina amin'ny tarehy, boribory maizina eo ambanin'ny masony, tonon-koditra tsy mitongilana ary poresy lehibe. Mampamirapiratra kokoa ny endrik'ilay tarehy, mahatonga ny hoditra ho voajanahary tanteraka.
Ny fototra miorina amin'ny rano dia manana fiasa mahamando sy manidy rano. Izy io dia misy ny manafotsy sy manosotra ary manamboatra akora mba hiarovana ny hoditra, manarona tsipika sy kentrona tsara, ary hahatonga ny hoditrao ho tonga lafatra kokoa.
Ny raikipohy maharitra, tsy tantera-drano ary tsy misy hatsembohana dia mamela anao hitazona makiazy hatsarana maharitra mandritra ny andro. Ny fikarakarana fototra maivana dia afaka mampitombo ny famirapiratany, mampamirapiratra ny lokon'ny hoditra ary mampandeha tsara ny hoditra. Ny famolavolana azo ampiasaina, ireo novista dia afaka mampiasa azy mora foana, mety ho an'ireo vehivavy manana ny lokon'ny hoditra.
2. Tsy misy legioma / Paraben / tsy misy menaka
4. malama, rakotra feno
5. Ho an'ny karazana hoditra rehetra
2.Q: Firy ny loko anananao amin'ny fototra?
A: Ny loko fototra dia misy loko 30 ho anao nofidinao, ary azonay atao koa ny manamboatra ny lokonao manokana.
Previous: Fototra avo lenta misy fotony feno rakotra fananganana marika manokana tsy miovaova matevina fototra
Manaraka: ambongadiny fonosana kosmetika solon-dronono vita amin'ny labozia vita amin'ny labozia manokana
fototra fananganana manokana marika manokana
marika fananganana ranon-javatra tsy misy fotony
fototra oem tarehy
Fanatanjahantena vegan ho an'ny fanatanjahan-tena manokana ...
mpivarotra makiazy manara-penitra tsy misy logo avo ...
menaka manala ny zavamaniry vegan eko manala ny ...
Fototra namboarina manokana matte foundatio ...
Kalitao avo lenta feno rakotra feno rakotra feno ...
Ambongadiny fototra fanaovana makiazy manokana vegan founda ...